Deg Deg:Maamulka Somaliland Oo Aqbalay inuu Hoos Tago kana Qaato Deeqda Caalamku siiyo Somalia Muqdisho, – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Maamulka Somaliland Oo Aqbalay inuu Hoos Tago kana Qaato Deeqda Caalamku siiyo Somalia Muqdisho,
Dawlada Fadaraalka soomaaliya Ayaa Maamulada u qeybisay Deeq Talaalka Covid 19 ah kaaso loo qeybiya Mamaulada Katirsan dawlada Fadaraalka Somaaliya,
Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayay maanta ka dirtay Dawlada soomaaliya Kaalmadii ugu horaysay ee Talaalka Covid 19 kaaso ka dagay Hargaysa iyo Garoowe.
:Diyaaradda Tallaalka COVID19 keentay Puntland waxay sidoo kale tallaal u siddaa Hargeysa, Somaliland oo hadda u duushay.
Diyaaraddan ayaa ka soo kacday goordhaweyd magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Previous Post: Deg Deg:Dal Caan ah oo Somalia Xayiraad kusoo Rogay,
Next Post: Deg Deg:Madaxweyne Farmaajo Qaatay Talaalka Covid 19 Oo Dalalka Badan iIska Joojiyen,
Kkkkkkk daawada qaata oo iska amusa.Diyaarada xagay soo martay iyo xagay soo martay waa wax lagu qoslo.
Aniga waxaan leeyahay reer qaadland waad sirin tihiin mudon 30 sano ah ayaan boorka iyo dhagaxa biyo la aan idinki heysaa ee markaad xamar timaadaan ayaad nafiataan ileen hasaad qeylisaan caacleysaan liinta ayaad jeelka ku cabeysaan walee iyo bilee ee maamulkiina u sheega banaan baxa ee soo raaxa dowlada dhexe ee uu farmaajo hogaamiyo
Horta marks hore talaalka waxa iska leh dowlada ingiriiska farmaajo iyo muqdisho iyo somalia toona maleh.
Marka xigta xarunta guud ee bariga Africa ee who waxay ku taala Nairobi. Muqdisho Nairobi ba loo soo mariyay, hargeysana Nairobi ba loo soo mariyay, garoowe na Nairobi ba loo soo mariyay,
Duulimaad toos ah oo ka dhaxeeya hargeisa iyo Mogadishu ma jirto. Kolka diyaar toos ah baa nooga timid Nairobi, muqdisho na uga timid, garoowe na uga timid. Farmaajo hadii loo dhiibi lahaa ama xamar lasoo marin lahaa walaa hargeisa ayuu soo gaadhi lahaa walaa garoowe waxaba waa siyaasadayn lahaa oo jeebku ku guran lahaa siduu horeba u yeelay ee Nairobi ba 3 daaba toos looga soo waariday.
Hadii daawo ladin siiyey maxaad ninka warka soo qoray ula dagaalaysaan. Maalinkasta deep muqdisha ka timaada ayaa heshaan. Dadkiina dhinaca karaaca. Scottish waa laga diiday inay go aan
Waa wax lagu qoslo kan khasaare news leh ee ku saxarooda internetka.
Dawooyinka Kenya ayaa laga keenay, waxa iska leh United Nationska World Health Organisation (WHO). Diyaaraddu jidkeedu wuxu ahaa Nairobi Muqidsho – Muqdisho – Garowe – Garowe – Hargeisa.
Wax Muqdsiho gaar u leeday meesha ma jiraan, WHO ayaa iska leh.
MA AAD BAY KUU FARXAD GELISEY, IN TALLAAL MUQDHISHO HARGEISA LOOGA SOO DIRO, KOLLEY HAWDKA BUUHOODLE AYAAD KU GAAJONEYSAA EE MAXAAD KA FAAIDEYSAA WADHAQEYNTA HARGEISA IYO MUQDHISHO OO AAN U ARKO WAX WANAAGSAN, WAAYO IYAGAA DAD ISUGU XIGA, TALLAALKUNA MA NOQON KARO AALAD SIYAASAD LOO ISTICMAALO.
LAAKIIN BEENTA IYO BOROBOGAANDADA IYO NACA AAD DADKA QAAR U QABTO, ISKA DAA UM FIICNA IFKAAGA IYO AAKHIRADAAD.